Dargaggoon suuraan isaa miidiyaalee hawaasummaa irratti qoodamaa ture Gammachuu Gaaromsaa jedhama - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, Feesbuukii
Suuraa dargaggoo osoo namoota uffata poolisii Oromiyaa uffataniin dararamuu agarsiisu
Godina Wallagga Lixaa Aanaa Ayiraa Ganda Lalisaa Buyyee keessatti dargaggeeessi Gammachuu Gaaromsaa jedhamu humnoota nageenyaatiin haala suukanneessaa ta'een ajjeefamuu maqaasaanii himuuf kan sodaatan maatii keessaa namni tokko BBCtti himaniiru.
Tibba darbe suuraan dargaggoo tokkoo yeroo namoota uffata poolisii Oromiyaa uffataniin dararamu miidiyaa hawwaasaarratti qoodamaa ture kan Gammachuu ta'uu dubbatan maatiin.
Dhimma kanarratti miidiyaaf ibsa kennee kan ture Komishiniin Poolisi Oromiyaa namoota yakka akkasii dhala namaarratti raawwatan sakatta'uun seeraan akka gaafatu ibsee ture.
Poolisiin Oromiyaa uummata Oromoof gaachana ta'ee kan hojjetu malee uummata kan dararu mitis jedheera komishinichi.
Maatiin dhimma kana irraa odeeffanne garuu deggertoota ABOti jedhamuun dararamaa jiraachuu fi poolisii Oromiyaa fi hidhattoota gandaa irraa amantii dhabaa jiraachuu dubbatan.
Abbaan kan irraa du'anii fi haadhasaa gargaaree kan jiraatu ta'uu kan nutti dubbatan maatii keessaa namni maqaansaanii akka eeramu hin barbaanne, Qeerroo Gammachuu Gaaromsaa akkuma qeerroo Oromoo warra kaanii adda durummaan falmataa ture jedhan.
Qeerroon Oromoo jijjiirama amma biyyattii keessatti argameef utubaa ta'an yeroo ammaa magaalaa Aayiraa keessatti akkaan adamsamaa jiraachuu kan dubbatan namni kun, Gammachuun hiriyoonni isaa wayita humnoota nageenyaatiin qabamanii wiirtuu leenjii Sanqalleetti geeffaman miliqee akka hafe nutti himan.
Ergasii inni dhokatee jiraata, humnoonni nageenyaa Poolisii Oromiyaa, hidhattoota Gandaa fi Raayyaa Ittisa Biyyaa of keessaa qabus isaa fi namoota akka isaa adamsaa turaniiru jedhan.
Keessattuu erga mootummaan Waraana Bilisummaa Oromoo isaan bosonatti hafan jedhaman loluuf jecha waraana gara lixa Oromiyaatti ramadee as dargaggoonni dararama hamaa keessa jiru jedhan.
Haaluma kanaan osooma barbaadanii Roobii darbe galagala gara Kamisaatti bari'u naannoo sa'atii 11 keessa bakka Gammachuun dhokatee jiru Ganda Lalisaa Guyyee mana Obbo Hambaa Fufaatti hiriyaa isaa biraa qaban jedhu namni kun.
Kan qaban Poolisii Oromiyaa fi Ittisa Gandaa yoo ta'an Raayyaan Ittisa Biyyaa ammoo naanna'anii eegaa turan jedhan.
Qaamoleen nageenyaa kunneen Gammachuu bakka inni bule baadiyyaa Godoo boqqolloo keessaa qabanii harkasaa dudda duubatti hidhanii hamma daandii guddaatti baasanitti reebaa akka turan nutti himan namni kun.
Isa booda konkolaataasaanii keessa buusanii Waajjira Poolisii Aanaa Aayiraa galchan, achittis akkumanni hidhametti erga reebaa turanii booda fuudhanii naannoo kiilomeetira 12 deemanii Aanaa Yuubdoo bakka Malkaa Qilxuu jedhamu geessan.
Achi bosona keessatti akkumanni hidhamee jirutti rasaasaan mataa fi qomasaa keessa rukutanii, qaamasaa bakka kaan ammoo saanjaadhaan kukkutanii ajjeesan.
Naannoo Malkaa Qilxuu sana ijoollee jimaa gurgurantu turan, isaanis reebanii achi hari'an,ergasii bosona keessatti sagalee meeshaa dhagahaa akka turan ijoolleen nutti himan jedhu namni kun.
Galgalarra naannoo sa'atii shaniitti odeeffannoo nu ga'ee deemnee reenfa bosona keessaa fudhanne jedhan.
Erga du'eellee akka deemnee reenfa fudhannee hin awwaallanneef nu sodaachisaa turan jedhan.
Dhumarratti dubartoonni sirna awwaalchaa raawwatan, dhiironni keessatuu dargaggoonni garuu sirna awwaalchaa kanarrattillee argamuu hin dandeenye jedhan.
Qeerroowwan Oromoo adamfamanii hidhamaa, ajjeefamaa fi butamanii achi buuteen isaanii dhabamaa jiraachuu kan dubbatan maatiin Gammachuu Gaaromsaa ajjeefamuun naannoo keenyatti waan nama raaju miti jedhan.
Qondaaltonni mootummaa maal jedhu?
Dhimma kanarratti kan dubbisne Itti Gaafatamaan Waajjira ODP Aanaa Aayiraa Obbo Ittaanaa Dimbaashaa wayita rakkoon kun mudatu leenjiif bakka biraa akka turan dubbatanii dhimmicha akkuma nama kaanii miidiyaa hawaasummaarraa dhageenye malee wanti beeknu hin jiru jedhan.
Gochaa suukanneessaan akkasii dhala namaarratti raawwatamuun waan hin malle kan jedhan Obbo Ittaanaan yoo naannoo isaaniitti raawwatameera ta'e adda baasuun akka nu beeksisan nutti himuudhaan alatti waan adda nuuf baasan hin qaban.
Bulchaan Godina Wallagga Lixaa Obbo Iyyaasuu wayita taateen kun mudatu walga'iif magaalaa Adaamaa akka turan nutti himan, gochi kun enyuun akka raawwatame ammaaf adda hin baafanne jedhan.
Komishiniin Poolisii Oromiyaas gocha raawate balaaleffatee qorannoo seeraaf dhiyeessina erga jedhee bubbuleera.
Erga Waraanni Bilisummaa Oromoo hangi ta'an deebi'anii hawaasatti makamanii warri kaan ammoo bosonatti hafanii as mootummaan tarkaanfii fudhachuuf humna nageenyaa gara Lixa Oromiyaatti bobbaaseera.
Keessaahuu ji'oota ja'an darban waqtii komaand postiin lixa Oromiyaatti labsamee jirutti humnoonni nageenyaa mootummaas ta'e Waraanni Bilisummaa Oromoo ofiin jedhan kanneen bosonatti hafan bakkeewwan keessa socho'an keessatti yaaddoo nageenyaa hamaan akka jiru jiraattonni BBCtti himaniiru.
Dhukaasa qaama lamaatiin dararamaa jiraachuu jiraattonni Godina Qellem Wollaggaa Aanaalee Gidaamii, Anfilloo, Aayiraa fi Sayyoo nutti himanii turan.
Maatiin dargaggoo ajjeefamee kun naannoo isaaniis haalli kun akka jiru nutti himan.
Torbee darbes Kantiibaan magaalaa Gullisoo mana isaanii fuulduratti rasaasaan rukutamanii ajjeefamuu gabaasnee turre.
Maatiin dargaggoo Gammachuu caasaalee Poolisii Oromiyaa, Ittisa biyyaa fi Paartii naannoo Oromiyaa bulchu ODP komatu.
Poolisiin Oromiyaa gaachana uummata Oromoo ta'ee wayita maqaa gaarii argatee jirutti yakka akkanaa ni raawwata jennee hin eegnu kan jedhan namni kun akkuma namni gaarii yaadu jiru kan hammeenya uummata Oromoorratti yaadu Caasaa poolisii Oromiyaa keessas akka jiru shakkina jedhan.
Keessattuu caasaaleen ODP sadarkaa aanaa fi gandarra jiran kanneen duraan qeerroo Oromoo balaaleffataa turan yeroo ammaa deebi'anii haaloo nutti ba'aa jiru jedhu namni kun.
Hidhaa fi ajjeechaan nurraa dhaabbate jennee bakka abdannetti yaaddoo nageenyaa caaluuf saaxilamuun keenya nu gaddisiisa jedhan.
Dargaggonni keenya ABO deggertu jedhamuun hidhaatti guuramuu, ni ajjeefamuu, ni dhabamsiifamu jedhan.
17 Ebla 2021